Imibandela Yokusebenza - MP4.to
MP4 ukuze MP3
MP4.to Imigomo Yesevisi
Ngokungena kuwebhusayithi ku- https : //mp4.to , uyavuma ukuboshwa yile migomo yesevisi, yonke imithetho nezimiso ezisebenzayo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho yendawo esebenzayo. Uma ungavumelani nanoma iyiphi yale migomo, uvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela leli sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe umthetho osebenzayo we-copyright nomaki wokuhweba.
Imvume inikezwa ukulanda okwesikhashana ikhophi eyodwa yezinto (imininingwane noma isoftware) kuwebhusayithi ye-M Mp4.to yokubuka okwakho okungahambisani nokuhweba kuphela. Lesi yisibonelelo selayisense, hhayi ukudluliswa kwetayitela, futhi ngaphansi kwale layisensi awukwazi:
sebenzisa okokusebenza nganoma iyiphi injongo yezentengiso, noma kunoma isiphi isibonisi somphakathi (ezentengiso noma okungezona ezentengiselwano);
ukuzama ukubola noma ukubuyisela emuva unjiniyela noma iyiphi isoftware equkethwe kuwebhusayithi ye- Mp4.to;
Le layisensi izonqamuka ngokuzenzakalela uma wephula noma iyiphi yale mikhawulo futhi ingaqedwa ngabakwa- Mp4.to nganoma yisiphi isikhathi. Lapho umisa ukubuka kwakho kwalezi zinto noma ukunqanyulwa kwale layisensi, kufanele uchithe noma yiziphi izinto ezilandiwe onazo noma ngabe zisefomethi kagesi noma ephrintiwe.
Izinto ezikuwebhusayithi ye Mp43to zinikezwa ngesisekelo 'njengoba sinjalo'. I-M Mp4.to ayenzi ziqinisekiso, eziveziwe noma ezisikiselwayo, futhi ngalokhu iyazilahla futhi iziphikise zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle komkhawulo, amawaranti asikiselwe noma imibandela yokuthengiselana, ukufaneleka ngenhloso ethile, noma ukwephulwa kwempahla enobuhlakani noma okunye ukwephulwa kwamalungelo.
Ngaphezu kwalokho, iM Mp4.to ayigunyazi noma ayenzi izethulo maqondana nokunemba, imiphumela engaba khona, noma ukwethembeka kokusetshenziswa kwezinto ezisetshenziswayo kwiwebhusayithi yayo noma okuhlobene nokunye okunjalo noma kunoma iziphi izingosi ezixhumene naleli sayithi.
Akunakusetshenziswa ukuthi i-M Mp4.to noma abahlinzeki bayo bathwale icala ngokulimala (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wokulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazamiseka kwebhizinisi) okuvela ekusetshenzisweni noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto ezikwi-Mp4.to's iwebhusayithi, noma ngabe i-M Mp44 noma ummeli ogunyaziwe we- Mp4.to wazisiwe ngomlomo noma ngencwadi ukuthi kungenzeka umonakalo onjalo. Ngoba ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukulinganiselwa kumawaranti ashiwo, noma imikhawulo yesikweletu ngokulimala okulandelanayo noma okuvelayo, le mikhawulo ingahle ingasebenzi kuwe.
Izinto ezivela kuwebhusayithi yakwa-M Mp4.to zingafaka amaphutha ezobuchwepheshe, ezokuthayipha, noma ezithwebula izithombe. I-M Mp4.to ayiqinisekisi ukuthi noma iziphi izinto ezisewebhusayithi yazo zinembile, ziphelele noma zikhona manje. IM Mp4.to ingenza ushintsho ezintweni eziqukethwe kwiwebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Kodwa-ke iMovie.to ayenzi ukuzibophezela ekuvuseleleni izinto.
I-M Mp4.to ayikazibuyekezi zonke izingosi ezixhunywe kwiwebhusayithi yayo futhi ayinabo obhekene nokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi enjalo exhumekile. Ukufakwa kwanoma isiphi isixhumanisi akusho ukugunyazwa yi-Mp4.to yesayithi. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi exhumene kanjalo kusengcupheni yomsebenzisi.
I-M Mp4.to ingabuyekeza le migomo yesevisi yewebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthi uzoboshwa yinguqulo yamanje yale migomo yesevisi.
Le migomo nemibandela ilawulwa futhi yathathwa ngokuya ngemithetho yaseConnecticut futhi uthumela ngokungenakuguqulwa kumandla akhethekile ezinkantolo kuleso Sifundazwe noma kuleyo ndawo.
Guqula kusuka ku-MP4
MP4 ukuze Audio
MP4 ukuze WAV
MP4 ukuze M4A
MP4 ukuze FLAC
MP4 ukuze WMA
MP4 ukuze MP2
MP4 ukuze M4R
MP4 ukuze OGG
MP4 ukuze AMR
MP4 ukuze DTS
MP4 ukuze Isiqophi
MP4 ukuze AVI
MP4 ukuze WMV
MP4 ukuze MPEG
MP4 ukuze Mov
MP4 ukuze MPG
MP4 ukuze DIVX
MP4 ukuze MPEG-2
MP4 ukuze MJPEG
MP4 ukuze FLV
MP4 ukuze 3GP
MP4 ukuze VOB
MP4 ukuze M4V
MP4 ukuze M3U8
MP4 ukuze MKV
MP4 kuya ku-SVG
MP3 ukuze MP4
WAV kuya MP4
M4A kuya MP4
I-FLAC kuya ku-MP4
WMA kuya MP4
I-AIFF kuya ku-MP4
I-AAC iye MP4
I-MP2 iye ku-MP4
M4R ukuze MP4
I-OGG iye ku-MP4
AC3 kuya ku-MP4
AMR kuya MP4
DTS kuya ku-MP4
I-OPUS iye ku-MP4
Isiqophi ukuze MP4
AVI kuya MP4
I-WMV kuya ku-MP4
I-MPEG kuya ku-MP4
Mov kuya MP4
I-MPG iye kwi-MP4
DIVX kuya MP4
MPEG-2 kuya MP4
MJPEG kuya MP4
I-FLV kuya ku-MP4
3GP kuya MP4
VOB kuya MP4
AV1 kuya ku-MP4
M4V ukuze MP4
I-MKV kuya ku-MP4
I-GIF iye ku-MP4
WEBP kuya ku-MP4
I-SVG kuya ku-MP4
15,719 ukuguqulwa kusukela ngo-2020!
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 MP4.to